Ivenkile ye-oyile ye-Ultrasonic yeoyile eyi-300ml China Manufacturer
Inkcazo:Ioyile ye-oyile eyi-300ml,Ultrasonic Diffuser 300ml,I-Wholesale Diffuser
Home > Imveliso > Ultrasonic Diffuser > Ivenkile ye-oyile ye-Ultrasonic yeoyile eyi-300ml
Ivenkile ye-oyile ye-Ultrasonic yeoyile eyi-300ml
Umzekelo No.: DT-1516
I-4 kwi-1 IMISEBENZI: IAromatherapy eNyaniswayo yeDisili eyi-oli, Humidifier, isicoci soMoya, ukukhanya kobusuku. CELA ucoce ubuncinci kube kanye ngeveki okanye emva kokusebenzisa amaxesha ama-5-6.
Uyilo olwahlukileyo: Eli phunga lingafaniyo nelinobuso linobukeka bendalo kwaye lilungile. Kwindawo yakho yokusebenza okanye kwikhaya lakho, bubugcisa obuhle obufanelekileyo kunye nokuhombisa.
Umthamo omkhulu kunye nokuSebenza okungenamanzi ngaphandle: Umsebenzi wokunyibilikisa okupholileyo unokugcina amanzi angama-300ml kwaye uqhubeke ngokuqhubekayo iiyure eziyi-8. Ukucima umbane xa amanzi ephelelwa, nto leyo eqinisekisa ukhuseleko.
Ukubekwa kwexesha kwexesha: Le Diffuser yeoyile eyakhelwe-4 ngeendlela zokumisela: 1 IYure / 3 IYure / 6 IYure / iSteady kwi. Unakho ngokweemfuno zakho zokuseta ixesha.
Umbala we-7 Mood Night Light izibane: I-ultrus diffuser yethu inikezela imibala esi-7 yemo yakho, kwaye iindlela ezimbini zinokukhethwa: ziqhubeke / zitshintsha umbala. Umbala ngamnye uyahlengahlengiswa phakathi kokukhanya kunye nokukhanya. Ukukhanya okukhulu kobusuku kubantwana abancinci aboyiki ubusuku obumnyama
Ioyile ye-oyile eyi-300ml imifanekiso:
Ioyile ye-oyile eyi-300ml Ultrasonic Diffuser 300ml I-Wholesale Diffuser Ioyile ye-oyile eyi-500ml Ioyile ye-oyile eyi-120ml I-oli ye-oli eyi-300ml Ubunzima beoyile ye-oyile eyi-150ml Ioyile yeoyile yeoyile yeNdawo